September 19, 2020 – Voice of Myanmar
YBS ယာဉ်တွေမှာ ကြော်ငြာကပ်တာတွေကို သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း လိုက်နာမှုမရှိရင် အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်
YBS ယာဉ်တွေမှာ ကြော်ငြာကပ်တာတွေကို သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း လိုက်နာမှုမရှိရင် အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ် ရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာ ၁၉-၂၀၂၀ ယဉ်ပပထွန်း ( VOM ) YBS ခရီးသည်ယာဉ်တွေအနေနဲ့ ကြော်ငြာတွေကပ်ရာမှာ သတ်မှတ်ချက်တွေကို လိုက်နာမူမရှိပါက အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှာ မလိုလားအပ်တဲ့ ပြဿနာတွေ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အတွက် အရေးယူဆောင်ရွက်တာတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ YRTAကနေ သိရပါတယ်။ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲရက် နီးကပ်လာတဲ့အတွက် YBS ဘတ်စ်ကားတချို့မှာ ပါတီစတစ်ကာတွေကပ်လာတာကို တွေ့လာရတဲ့အတွက် YBSယာဉ်တွေအနေနဲ့အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ဆောင်ရွက်ရာမှာ ပါတီအလံများ စတစ်ကာများကပ်ခြင်းကို မဆောင်ရွက်ဖို့ အသိပေးကြေညာစာတွေလည်းYRTAကနေ ထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့ ယာဉ်မောင်းအချို့ရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွေမှာ ရေးသားဖော်ပြထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ” မဲဆွယ်တာကို ဘာမှမပြောလိုဘူး ။ မော်တေ်ကားတွေပြုပြင်ပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာ မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီဥပဒေထဲမှာ ဖော်ပြထားတာရှိတယ် ။ လိုက်နာဖို့အတွက် ယာဉ်လိုင်းတွေကို ထုတ်ထားတယ် ။ မလိုက်နာဘူးဆိုရင် သတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကို မလိုက်နာတာဖြစ်တယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့ ဥပဒေနဲ့အညီဆောင်ရွက်တာအကောင်းဆုံးပဲ ။…
ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကြောင့် မန္တလေး ကုန်စည်ဒိုင်ကို ယာယီပြန်ပိတ်မယ်
ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကြောင့် မန္တလေး ကုန်စည်ဒိုင်ကို ယာယီပြန်ပိတ်မယ် မန္တလေး၊ စက်တင်ဘာ ၁၉-၂၀၂၀ မောင်တာရာ (VOM) Covid -19 ရောဂါကူးစက်မှုမြှင့်မားလာတဲ့အတွက် မန္တလေးမြို့ ပွဲစား၊ ကုန်စည်၊ စက်ပိုင်များ မဟာကထိန်တော်အသင်း(ကုန်စည်ဒိုင်)ကို လာမယ့် စက်တင်ဘာ ၂၁ ရက်နေ့က စတင်ပြီး ယာယီပြန်လည်ပိတ်သွားမယ်လို့ ကုန်စည်ဒိုင် ဒု-ဥက္ကဌ ဦးမျိုးဆွေက ပြောပါတယ်။ ပြည်တွင်းကူးစက်ခံရမှုမြှင့်တက်လာတဲ့အတွက် အသင်းသူ၊အသင်းသားတွေနဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ရှေ့ရှုပြီး ဒီကနေ့ စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ ကုန်စည်ဒိုင် အလုပ်အမှုဆောင်အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ ကုန်စည်ဒိုင်ကို စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့ကနေ အောက်တိုဘာ တစ်ရက်နေ့အထိ ယာယီပိတ်ထားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ”ဒီလ ၂၁ ရက်နေ့က စပိတ်ပါမယ်။ အဓိကက ကျန်းမာရေးကြောင့် ပြန်လည်ပြီးယာယီပိတ်တာပါ။ လက်ကျန် လုပ်စရာလေးတွေရှိတာ လုပ်ရအောင် မနက်ဖန် တစ်ရက်တော့ ဖွင့်ပါမယ်။”လို့…
အမေရိကန်ပြည်သူအားလုံးအတွက် ဧပြီလမှာ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေးရမယ်လို့ ဒေါ်နယ်ထရန့်ပြော ဝါရှင်တန်၊ စက်တင်ဘာ-၁၉-၂၀၂၀ မျိုးဆက်(VOM) လာမယ့် ဧပြီလမှာ အမေရိကန်ပြည်သူအားလုံးအတွက် ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေးတစ်မျိုး ရရှိလိမ့်မယ်လို့ အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရန့်က ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ သန်းနဲ့ချီတဲ့ ကာကွယ်ဆေးတွေကို လစဉ်လတိုင်းရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ ဒေါ်နယ်ထရန့်က အိမ်ဖြူတော်မှာ စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက်ကပြောပါတယ်။ သူ့ရဲ့ပြောဆိုမှုဟာ ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ ကာကွယ်ရေးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးရဲ့ခန့်မှန်းချက်နဲ့ ကွဲလွဲနေပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေးဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒုတိယသုံးလပတ်သို့မဟုတ် တတိယသုံးလပတ်ကျမှသာ အမေရိကန်ပြည်သူတွေအတွက် ယေဘူယျအားဖြင့် ရရှိနိုင်မယ်လို့ ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ ကာကွယ်ရေးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ရောဘတ်ရက်ဖီးက ကွန်ဂရက်ကြားနာမှုတစ်ရပ်မှာ ပြောဆိုထားပါတယ်။ ရောဘတ်ဖီးရဲ့ ပြောဆိုချက်ဟာ အချက်အလက်မမှန်ကန်ကြောင်း ဒေါ်နယ်ထရန့်က တုံ့ပြန်ပြောဆိုထားပြီး အခုနှစ်ကုန်မှာ ကာကွယ်ဆေး သန်း ၁၀၀ ထက်မနည်းကို ပြည်သူတွေအတွက် ဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သမ္မတရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ ရက် ၅၀…
သက္ကလတိုက်နယ်ဆေးရုံမှာ ပထမအကြိမ် ပိုးမတွေ့အဖြေထွက်ထားသူတွေထဲက ၃၅ ဦးမှာ Covid-19 ပိုးပြန်တွေ့
သက္ကလတိုက်နယ်ဆေးရုံမှာ ပထမအကြိမ် ပိုးမတွေ့အဖြေထွက်ထားသူတွေထဲက ၃၅ ဦးမှာ Covid-19 ပိုးပြန်တွေ့ နေပြည်တော်၊စက်တင်ဘာ ၁၉-၂၀၂၀ ကောင်းလက်‌ျာ(VOM) ပဲခူးတိုင်း‌၊ ကဝမြို့နယ်ထဲမှာ Covid-19အတည်ပြုလူနာနဲ့ ထိတွေ့ခဲ့သူ ၁၁၂ ဦးကို သက္ကလတိုက်နယ်ဆေးရုံမှာ အသွားအလာ ကန့်သတ်စောင့်ကြည့်ထားပြီး ပထမအကြိမ်တို့ပတ်နမူနာယူစစ်ဆေးချိန်က နက်ဂတစ်(ပိုးမတွေ့)အဖြေထွက်ရှိထားသူ ၃၅ ဦးမှာ ကိုဗစ်ရောဂါပိုး စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ ကဝမြိုနယ် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကနေ သိရပါတယ်။ ” ဒီကနေ့ လူနာ ၃၅ ဦးက ၈ ရက်နေ့ကစစ်ဆေးစဉ် နက်ဂတစ်အဖြေထွက်ထားပြီးသူ‌တွေပါ။ ဒီက‌နေ့ ‌ရောဂါးပိုးပြန်‌တွေ့တာဖြစ်ပြီး ဆေးရုံမှာ စောင့်ကြည့်ထားတဲ့ ၁၁၂ ဦးထဲကပါ။ထပ်စစ်မယ် မစစ်ဘူးကတော့ အထက်က ညွန်ကြားမှသာ သိရမယ်”လို့ ကဝမြို့နယ်ပြည် သူ့ ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှ ဦးစီးမှူး ဒေါက်တာမောင်မောင်ချစ်က ပြောပါတယ်။ ကဝမြို့နယ်၊ သက္ကလစံပြကျေးရွာ တိုက်နယ်ဆေးရုံက ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတစ်ဦး စက်တင်ဘာ ၅ ရက်နေ့မှာ Covid…
ပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းမိတ်ဆက် ၊ ဦးအေးကြူ (ပြည်သူ့ပါတီ ၊ ပြည်ကြီးတံခွန် ပြည်သူ့လွှတ်တော်)
ပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းမိတ်ဆက် ၊ ဦးအေးကြူ (ပြည်သူ့ပါတီ ၊ ပြည်ကြီးတံခွန် ပြည်သူ့လွှတ်တော်) ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းရိုက်ခတ်မှုကြောင့် လူပေါင်း ၄၆၀၀ကျော်ကူးစက်ခံရပြီး ၇၅ ဦးသေဆုံးတဲ့ ကာလမှာ ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်ရတဲ့ ပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေဟာ မဲဆွယ်စည်းရုံးရာမှာ အခက်အခဲအများကြီးရှိနေပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့် Voice Of Myanmar (VOM) သတင်းဌာနရဲ့ စတူရီယိုကို မဲဆွယ်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေအတွက် အသုံးပြုခွင့်ပေးပြီး အွန်လိုင်းကနေ အစီအစဉ်တွေတင်ပေးခြင်းနဲ့ ကူညီပံ့ပိုးပေးနေပါတယ်။ ဒါမှသာ ပြည်သူအများ ကိုဗစ်၁၉ ပိုးကူးမယ့် အန္တရာယ်ကို ကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး ကျမ္မာရေးဝန်ထမ်းတွေကို အကူညီပေးရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ VOM ကိုချိတ်ဆက်လာတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေထဲကနေ ပြည်သူ့ပါတီ (PP) ရဲ့ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် ပြည်သူ့ပါတီရဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးအေးကြူနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ #voiceofmyanmar #VOM #လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းမိတ်ဆက် #ပြည်သူ့ပါတီ #ဦးအေးကြူ Zawgyi ပါတီကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမိတ္ဆက္ ၊ ဦးေအးၾကဴ (ျပည္သူ႔ပါတီ ၊…
သီရိမင်္ဂလာဈေးမှာ ကိုဗစ်ပိုးတွေ့လူနာ ၈ ဦးထိရှိထားပေမယ့် ဈေးကိုပိတ်ထားခြင်းမရှိ
သီရိမင်္ဂလာဈေးမှာ ကိုဗစ်ပိုးတွေ့လူနာ ၈ ဦးထိရှိထားပေမယ့် ဈေးကိုပိတ်ထားခြင်းမရှိ ရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာ ၁၉-၂၀၂၀ သိင်္ဂီ(VOM) ရန်ကုန်တိုင်းထဲက အကြီးဆုံးကုန်စိမ်းလက်ကားဈေး သီရိမင်္ဂလာဈေးမှာ ကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာ ၈ ဦးအထိရှိနေပေမယ့် ဈေးကိုပိတ်ထားခြင်းမရှိဘဲ ဖွင့်လှစ်ထားဆဲဖြစ်တယ်လို့ သီရိမင်္ဂလာဈေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။ သီရိမင်္ဂလာဈေးကြီးဟာ ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းက ဈေးတွေကို ပြန်လည်ဖြန့်ဝေရောင်းချပေးနေရတဲ့ ကုန်စိမ်းလက်ကားဈေးကြီးဖြစ်လို့ ဈေးပိတ်လိုက်ပါက ရန်ကုန်နေပြည်သူတွေအတွက် စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲဖြစ်ပေါ်နိုင်တာကြောင့် ဈေးကို ဖွင့်နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ” လက်ရှိတော့ ဈေးကို ပိတ်ထားဖို့ ညွှန်ကြားချက်မရှိသေးပါဘူး။ အဓိက ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းက ဈေးတွေကတဆင့်လာဝယ်ကြတယ်၊ နောက် နယ်ကလည်း လာကြတယ် နယ်ဆိုတာ မှော်ဘီ တိုက်ကြီး ရှိတယ်၊ ဧရာဝတီတကြောရှိတယ် ပဲခူးဘက်ရှိတယ်။သီရိမင်္ဂလာဈေးက အဓိကကုန်စိမ်းဖြန့်ဖြူးတဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းရဲ့ အကြီးဆုံး အဓိကဈေးဖြစ်တယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းက ပြည်သူတွေစားသုံးဖို့အတွက် အခက်အခဲဖြစ်မှာစိုးလို့ ဖွင့်ခိုင်းထားတယ်။”လို့ ဈေးတာဝန်ခံ ဦးအောင်လင်းဦးကပြောပါတယ်။ သီရိမင်္ဂလာဈေးကြီးအတွင်းကို ဝင်ရောက်သူတိုင်းဟာ မက်စ် ၊…
ကိုဗစ်၁၉ ရောဂါကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲ ရွှေ့ဆိုင်းဖို့မရှိ မန္တလေး-စက်တင်ဘာ ၁၉-၂၀၂၀ နေလင်း(VOM) မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီနဲ့ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တို့ ဦးဆောင်ပြီး ယူနက်စကိုရဲ့ ပံပိုးကူညီမှုနဲ့ ကျင်းပတဲ့ ” ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနှင့် သတင်းမီဒီယာများ၏အခန်းကဏ္ဍ” အွန်လိုင်းဆွေးနွေးပွဲမှာ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးမြင့်နိုင်က ကိုဗစ်၁၉ ရောဂါကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲ ရွှေ့ဆိုင်းဖို့မရှိဘူး လို့ VOM ရဲ့ အမေးကို ဖြေကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ “ပါတီ ၂၄ ပါတီက လက်မှတ်ထိုးတင်ပြတာတွေရှိသလို တချို့ပါတီငယ်တွေက ရွေးကောက်ပွဲရွေ့သင့်တယ်ပြောကြတာတွေရှိပါတယ်၊သူတို့ကကိုဗစ်အတွက်စိုးရိမ်ကြောင်းပဲပြောတယ်၊ ကျနော်တို့က မဲထည့်မယ့်သူတွေအတွက် လုံခြုံမှုရှိအောင် စိုးရိမ်မှုမရှိအောင်လုပ်ထားပါတယ်။ ဒီလိုတွေ ကြိုတင်လုပ်ထားတာမို့ ကိုဗစ်ကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲ ရွေ့မယ့်အစီအစဉ်မရှိပါဘူးလို့ “ ပြောပါတယ် ။ Stay at home သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာ မဲဆွယ်စည်းရုံးခွင့်ကိုတော့ Online ကနေမဲဆွယ်လို့ရကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်တဲ့နေရာမှာ ပါတီစည်းရုံးရေးနဲ့ ကိုယ်စားလှယ်စည်းရုံးရေး ၂ပိုင်းရှိကြောင်း…
Election, သတင်းLeaveacomment
မျှစ်ချိုးသွားတဲ့ အမျိုးသမီး၃ဦး မြေမြုပ်မိုင်းနင်းမိပြီး တစ်ဦးသေ ၊ ၂ဦး ဒဏ်ရာရ
မျှစ်ချိုးသွားတဲ့ အမျိုးသမီး၃ဦး မြေမြုပ်မိုင်းနင်းမိပြီး တစ်ဦးသေ ၊ ၂ဦး ဒဏ်ရာရ ပလက်၀ ၊ စက်တင်ဘာ ၁၉-၂၀၂၀ ကိုတိုးကြီး (VOM) ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ပလက်ဝမြို့ ၊ မြို့မရပ်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့ အမျိုးသမီး ၃ဦးဟာ မနေ့စက်တင်ဘာ ၁၈ရက်မနက်ပိုင်းက တောအတွင်း မျှစ်ချိုးသွားရာကနေ မြေမြုပ်မိုင်းနင်းမိပြီး ပေါက်ကွဲခဲ့တာကြောင့် အမျိုးသမီး၁ဦး နေရာမှာတင် သေဆုံးခဲ့ပြီး ကျန် အမျိုးသမီး ၂ဦးလည်း ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ ပလက်ဝမြို့ဒေသခံတွေ ပြောပြချက်အရ သိရပါတယ်။ “ ကုလားတန်မြစ်ရဲ့ အရှေ့ဘက်ခြမ်း ပလက်ဝနဲ့ဆို ၄ – ၅ ဖာလုံလောက်ပဲဝေးမှာပါ ၊ မိုင်းပေါက်ကွဲတဲ့ နေရာမှာတင် သေဆုံးသွားသူက ပလက်၀ ၊ မြို့မရပ်ကွက်ထဲမှာနေတဲ့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသူ အသက် (၄၀) နှစ် ဒေါ်မေနုသိန်း ဖြစ်တယ် ၊ သူနဲ့အတူ မျှစ်ချိုးအဖော်လိုက်သွားတဲ့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသူနှစ်ယောက်လည်းပါတယ်…
ပါတီမိတ်ဆက်(မြိုတိုင်းရင်းသားပါတီ-M.N.P.) မန္တလေး၊စက်တင်ဘာ၁၉-၂၀၂၀ လဲ့လဲ့ဝင်း(VOM) လာမယ့်၂၀၂၀နိုဝင်ဘာလ၈ရက်နေ့ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ပြိုင်မယ့် မြိုတိုင်းရင်းသားပါတီအတွင်းရေးမှူးဦးမင်းအောင်ကိုVOMသတင်းထောက်လဲ့လဲ့ဝင်းကမေးမြန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ VOM – ပါတီအနေနဲ့ဝင်ပြိုင်မယ့်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဘယ်လောက်အရေအတွက်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုတင်ထားလဲ။ ဦးမင်းအောင်-ကျနော်တို့ပါတီကရခိုင်ပြည်နယ်မှာစည်းလုံးတဲ့ပါတီဆိုပြီး မူဝါဒမှာထုတ်ပြန်ထားတဲ့အတွက်ကျနော်တို့ပါတီကတော့၃ယောက်တည်းပဲ ပြိုင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုတင်ထားပါတယ်။ VOM – ပါတီရဲ့ကတိကဝတ်ကဘာတွေဖြစ်မလဲ။ ဦးမင်းအောင်-မောင်တောမှာတော့ကျွန်တော်နိုင်ချေရှိတဲ့အတွက်နိုင်အောင်ကျိုးစားသွားမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်လုပ်ဆောင်သွားပါမယ်။ VOM- အာဏာရပါတီ၊ပြည်ခိုင်ဖြိုးစတဲ့ပါတီကြီးတွေကိုဘယ်လိုအင်အားတွေနဲ့ယှဉ်ပြိုင်သွားမလဲ။ ဦးမင်းအောင်-ဒီပါတီအရနဲ့ဆိုတော့ကျနော်တို့ဒီမောင်တောမြောက်ပိုင်းမှာကျနော်တို့ရဲ့လူမျိုးတွေကအများစုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ကကိုယ့်လူမျိုးကိုကိုယ်ကအကုန်လုံးပိုင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောထားနဲ့ ကျနော်တို့ကရနိုင်ချေရှိတဲ့အတွက်ကျနော်တို့ကအဲ့လိုသဘောထားနဲ့ကျနော်တို့ပြိုင်တော့မှာဖြစ်တယ်။ VOM-၂၀၁၅မှာဘယ်နှနေရာနိုင်ခဲ့လဲ။ ဦးမင်းအောင်-အဲ့ဒီတုန်းကကျနော်တို့လူနည်းစုတွေကထိတွေ့မှုနည်းတယ်၊အတွေ့ကြုံနည်းတယ်ဆိုတော့အတွေ့ကြုံမရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီတုန်းကကျနော်တို့ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။တောင်ပေါ်ဒေသကဆိုတဲ့အတွက်မဲပေးပုံစနစ် နားမလည်တာတစ်ပိုင်း၊ အဲ့ဒီမှာဝေးလံခေါင်ခိုက်တဲ့နေရာမှာမဲရုံအလှမ်းဝေးတဲ့နေရာမှာဆိုတဲ့အခါမှာမလာနိုင်တဲ့လူကတစ်ပိုင်း၊ ကြိုတင်မဲနဲ့အဆင်မပြေလို့ တမျိုး၊ ပြီးတော့အင်အားကြီးပါတီကျနော်တို့ကိုအကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့နိပ်ကွပ်လုပ်ဆောင်သွားတာကြောင့် ကျနော်တို့နစ်နာသွားတယ်။ VOM- ပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းကိုဘယ်လိုရွေးတာလဲ။ ဦးမင်းအောင်-အမျိုးသားကိုယ်စားပြုဆိုတော့ကိုယ့်မြို့နယ်(ရခိုင်ပြည်နယ်)၄မြို့နယ်မှာကျနော်တို့ကဗမာအစည်းအဝေးလုပ်ပြုကဗဟိုရုံးကိုဘယ်သူကသင့်တော်၊ဘယ်သူကမသင့်တော်၊ဘယ်သူကအရည်ချင်းရှိမရှိ။ ကိုယ့်လူမျိုးအတွက် အမှန်တယ်ကယ် စေတနာရှိတဲ့လူကိုကျနော်တို့ကအဓိကဦးစားပေးတာ။သည်လိုဘဲရွေးချယ်သွားပါတယ်။ VOM- ပါတီဝင်အင်အားဘယ်လောက်ရှိပါသလဲ။ ဦးမင်းအောင်-ရခိုင်ပြည်နယ်မှာကျနော်တို့က၂သောင်းကျော်ရှိပါတယ်။ VOM -ပါတီရဲ့ဆောင်ပုဒ်တွေကဘာတွေလဲ။ ဦးမင်းအောင်-ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလူနည်းဆုံးအနေနဲ့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ ကိုယ့်ညီအကိုအချင်းချင်းရန်ဖြစ်တဲ့ ရခိုင်မျိုးလူစုနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကိုယ့်အားနည်းချက်၊အားသာချက်တို့ကိုကျနော်တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်။ #voiceofmyanmar #VOM #ပါတီမိတ်ဆက် #မြိုတိုင်းရင်းသားပါတီ zawgyi ပါတီမိတ္ဆက္ (ၿမိဳတိုင္းရင္းသားပါတီ-M.N.P.)…
ပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းမိတ်ဆက် ၊ စိုင်းသန်းထိုက်(ပြည်သူ့ပါတီ ၊ ပြည်ကြီးတံခွန် မဲဆန္ဒနယ် ၂)
ပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းမိတ်ဆက် ၊ စိုင်းသန်းထိုက်(ပြည်သူ့ပါတီ ၊ ပြည်ကြီးတံခွန် မဲဆန္ဒနယ် ၂) ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းရိုက်ခတ်မှုကြောင့် လူပေါင်း ၄၆၀၀ကျော်ကူးစက်ခံရပြီး ၇၅ ဦးသေဆုံးတဲ့ ကာလမှာ ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်ရတဲ့ ပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေဟာ မဲဆွယ်စည်းရုံးရာမှာ အခက်အခဲအများကြီးရှိနေပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့် Voice Of Myanmar (VOM) သတင်းဌာနရဲ့ စတူရီယိုကို မဲဆွယ်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေအတွက် အသုံးပြုခွင့်ပေးပြီး အွန်လိုင်းကနေ အစီအစဉ်တွေတင်ပေးခြင်းနဲ့ ကူညီပံ့ပိုးပေးနေပါတယ်။ ဒါမှသာ ပြည်သူအများ ကိုဗစ်၁၉ ပိုးကူးမယ့် အန္တရာယ်ကို ကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး ကျမ္မာရေးဝန်ထမ်းတွေကို အကူညီပေးရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ VOM ကိုချိတ်ဆက်လာတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေထဲကနေ ပြည်သူ့ပါတီ (PP) ရဲ့ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်(၂) ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်း စိုင်းသန်းထိုက်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ #voiceofmyanmar #VOM #လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းမိတ်ဆက် #ပြည်သူ့ပါတီ #စိုင်းသန်းထိုက် Zawgyi ပါတီကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမိတ္ဆက္ ၊ စိုင္းသန္းထိုက္(ျပည္သူ႔ပါတီ ၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္…